विपन्नलाई राहतमा कुहिएको गन्हाउने चामल - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS विपन्नलाई राहतमा कुहिएको गन्हाउने चामल
राहत बाँड्न लहान नगरपालिकाको एक करोड ३० लाख बजेट
खाएर छाक टारेका सर्वसाधारणलाई पखाला : मेयर मुनी साह भन्छन्, ‘आजभोलि मजदुरी गर्नेहरूले पनि राम्रो चामल खान थालेका छन्, त्यसैले नगरपालिकाले दिएको चामल गुणस्तरहीन भनेका हुन्’
लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएपछि हातमुख जोड्न अप्ठ्यारोमा परेका विपन्नलाई राहत वितरण गर्न सिराहाको लहान नगरपालिकाले एक करोड ३० लाख खर्च गरेको छ, तर राहत थाप्ने विपन्नको भागमा कुहिएको चामल परेको छ । गन्हाउने चामल पकाएर छाक टारेका कैयौँलाई पखाला लागेको छ ।
राहत बाँड्ने दिन विपन्न परिवार नगरपालिका कार्यालयमा ओइरिएका थिए । दिनभर लाइन लागेर २० किलो चामलसहितको राहत पाएपछि खुसी हुँदै घर गएकाले पनि खाना खान पाएनन् । किनकि चामल पकाउँदा नै गन्हाएर घरभित्र बस्न नसक्ने भएको थियो । तर, कैयौँ विपन्न दलितले त्यही गन्हाउने भात खाएर छाक टारे, तर रातिदेखि नै पखाला लागेर उनीहरू बिरामी छन् । खासगरी वडा नं. ५, १५ र २४ का का बासिन्दालाई पेट दुख्ने र पखाला लाग्ने समस्या छ ।
जुम्लामा म्याद नाघेको आयोडिन नुन वितरण
लकडाउनका कारण आफैँ मर्कामा परेका जुम्लाका विपन्न परिवारलाई हिमा गाउँपालिकाले म्याद नाघेको नुन वितरण गरेको छ । स्थानीय जनताले गुनासो गरेपछि प्रशासनले नुन वितरणमा रोक लगाएको छ ।
बाजुराको बडिमालिकामा पनि कुहिएर डल्ला परेको चामल बाँडियो
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले पनि राहतका नाममा कुहिएको चामल वितरण गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट किनेर नगरपालिकाले चामल वितरण गरेको थियो ।
बडिमालिका नगरपालिकाले अतिविपन्न र एकल महिलालाई एक सय ५० क्विन्टल चामल राहतमा वितरण गरेको थियो । ३० परिवारलाई २० केजीका दरले र एक सय ४५ जनालाई १० केजीका दरले राहत वितरण गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र नाथले बताए ।
आफ्नो टोलमा आएको सबै ६ बोरा चामल कुहिएर डल्ला परेको वडा नं. ४ निवासी नरेन्द्र नाथले बताए । खाद्य कम्पनी बाजुरा शाखाका प्रमुख मेखराज ओझाले भने गएको वर्ष असारमा नै चामल किनिएको बताए । ‘धनगढीमै प्याकिङ भएर ढुवानी भएको थियो, हामीले बोरा खोलेका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘कुनै बोरा खराबी हुन सक्छ, गुनासो आए फिर्ता गर्छौं ।’
कलैया उपमहानगरपालिकाले सरकारी बजेटमा सर्वसाधारणलाई कीरा लागेको दाल वितरण गरेको छ, त्यो पनि मेयर राजेश रायको पसलबाट खरिद गरेर । प्रहरीले २५ बोरा दाल बरामद गरेको छ भने रायको गोदाम ‘सिल’ लगाएको छ ।
मेयर रायले कलैया– २० मा सञ्चालन गरेको ‘आइस एन्ड कोल्ड स्टोर’को गोदाम सिल गरिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले बताए । ‘२५ किलो दरका तीन सय ८० बोरा दाल रहेको गोदाम सिल गरिएको छ । स्थानीयलाई वितरण गर्न लागिएको २५ बोरा दालसमेत नियन्त्रणमा लिई वसन्तपुर चौकीमा राखिएको छ,’ पंगेनीले भने ।
नयाँ पत्रियकाबाट साभार गरिएकाे